Topnepalnews.com | कारवाहि हुनुपर्ने रअको एजेन्ट बिमलेन्द्र निधिलाई हो सिडिओ र प्रहरीलाई किन ?
कारवाहि हुनुपर्ने रअको एजेन्ट बिमलेन्द्र निधिलाई हो सिडिओ र प्रहरीलाई किन ?
Posted on: March 08, 2017 | views: 1812
विदेशी दलालमाथि कार्वाहि नहुने कारण के ?
दल नामका दलालहरूलाइ नियन्त्रण गरेर विदेशीहरूले निशाना बनाएकाे मूख्य पंक्ति सुरक्षा निकाय हाे। सेनालार्इ विभाजित गर्ने उद्देश्यले कटुवाल काण्ड घटाए ।
०६३ सालपछि देशभरि कमानका विरूद्धमा प्रहरी विद्राेहकाे अायाेजना गरे। टीकापुरमा याेजनाबद्ध रूपमा दर्जन जति प्रहरीहरूकाे हत्या गराए। सुडान घाेटाला काण्डमा अाफूले पैसा खाएर मतियार बनेका प्रहरी हाकिमहरूलार्इ मात्र कार्वाहि गरे। एएरपाेर्टकाे ३३ किलाे सुन तस्करीमा पनि यहि भएकाे छ। सप्तरी घटनामा यहि दाेहरिएकाे छ।
घटनाकाे जिम्मेवार मूख्य व्यक्ति हुन्छ। कार्वाहि हुनु पर्ने रअ काे एजेन्ट निधिलार्इ हाे कि सिडिअाे र प्रहरी अधिकृतहरूलार्इ ? याे सुरक्षा निकायलार्इ निरिह बनाउने, मनाेबल घटाउने, विभाजित गर्ने र विदेशी दलालहरूप्रति नतमस्तक बनाउने षडयन्त्र हाे। ०६४ सालमा पहाडि धपाउने याेजनामा ५० जति मानिस मार्ने, गाैर हत्याकाण्ड गराउने, गतसाल ५४ जना मधेशी नागरिक मार्ने र अहिले सप्तरी हत्याकाे डिजार्इन बनाउने राजनीतिक वृत्तका विदेशी दलालमाथि कार्वाहि नहुने कारण के ?
शासन प्रणालि, दलीय प्रणालि, अार्थिक-सामाजिक प्रणालि सबैलार्इ विदेशीहरूले छिन्नभिन्न पारिसकेकाे अवस्थामा सुरक्षा पंक्तिले मात्र बाँकि बचेकाे सिष्टमकाे भरथेग गरेकाे छ। यसलार्इ पनि छिन्नभिन्न बनाउने सुरमा साम्राज्यवादीहरू लागेका छन्। दलकाे खाेलमा लुकेका अपराधिकाे कुत्सालार्इ सुरक्षापंक्तिले समयमैं बुझ्न र अघि बढ्न अावश्यक छ। यी दलालहरूले सुरक्षा पंक्तिमा विद्राेह गराउने सम्मका हर्कतहरू गरिसकेकाे तथ्यलार्इ ध्यानमा राखेर ब्यहार गर्न जरूरि छ।
गृहमन्त्री पहाडि मूलकाे मानिस भएकाे भए दिल्लीका ब्वाँसाहरूले बिहारीहरूकाे पटना बैठक बाेलार्इ सक्थे, अाफ्नै मुन्सी परेकाेले मुख बन्द भएकाे छ।
नेतामाथि गाेलि चलाउ !
देशलार्इ अराजकतामा फसाउने चाहिं दलकाे मुकुण्डाेमा लुकेका विदेशी एजेन्टहरू, टीकापुर र सप्तरीमा मृत्यू र कार्वाहिकाे शिकार बनार्इने चाहिं सुरक्षाकर्मिहरू ! श्रीलङ्काका एक सैनिकले अाफ्नाे देशमाथिकाे भारतीय अत्याचार सहन नसकेर राजीव गान्धिलार्इ बन्दूककाे कुन्दाले प्रहार गरे जस्तै नेपाललार्इ अस्तव्यस्त बनाएर विदेशी परेडस्थल बनाउन उद्दत दलका नेताहरूमाथि गाेलि चलाउ। यति नगर्दासम्म सुरक्षाकर्मिहरू दलालहरूकाे शिकार भैरहने छन्।
एमाले हठ भनेकाे के ?
प्रायाेजित मिडिया र इण्डाे-पश्चिमी साम्राज्यवादी सेन्टरका जासुसहरूले सप्तरीकाे घटनामा एमालेकाे हठ पनि जिम्मेवार रहेकाे कुतर्क गरिरहेका छन्। एमालेकाे हठ भनेकाे अाफ्नाे कुरा गर्न नपाउने भन्ने हाे वा के हाे भन्ने यिनीहरूले बताउन चाहेकाे देखिन्न तर यिनीहरूले अभिव्यक्ति हेर्दा के बुझिन्छ भने तराइ दिल्लीकाे प्रगन्ना हाे र त्यहाँ बिहारी चल्लाहरूले बाहेक अरू कसैले केहि गर्न, शिर उठाउन वा बाेल्न पनि पाउनु हुँदैन।
तराइमा दिल्लीले मनाेनित गरेका र दिल्लीले चाहेका बाहेक अरू कसैकाे अस्तित्व हुनु हुँदैन भन्ने कुरा स्थापित गर्न धेरै घटनाहरू भैसकेका छन्। ०६४ सालकाे पहाडी धपाउने अभियान अन्तर्गत ५० जना जतिकाे हत्या, गाैर हत्याकाण्ड, कैलालि हत्याकाण्ड र अहिले एमाले विरूद्ध चलाउन खाेजिएकाे अभियानका पछाडि कुनै मधेशीकाे मुद्दा जाेडिएकाे नभएर तराइलार्इ नेपालबाट अलगथलग गर्ने दिल्लीकाे याेजना जाेडिएकाे छ।
यहाँ अाउने सबै भारतीय नेताहरूले मधेशवादकाे नकाबमा परिचालन गरिएका बिहारीहरूलार्इ सामुहिक रूपमा मात्र भेट्ने गरेकाे तथ्यले के सन्देश दिंदै अाएकाे छ भने भारतीयहरूले तराइलार्इ छुट्टै भूमिका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्दै अारएका छन्। पटनामा तिनीहरूले गर्ने नेपाल विराेधि बैठकहरूले पनि यसकाे पुष्टि गरिसकेका छन्। याे सबै षडयन्त्रलार्इ नखाेतलेर एमालेकाे हठकाे कुरा चर्काउन खाेज्नेहरू संदिग्ध तत्वहरू हुन्।
साम्राज्यवादका भरियाहरूसंग जबाफ छ ?
दासढुंगा हत्याकाण्डकाे छानबिन किन भएन ? अमरलामाकाे हत्या गरेर दासढुंगाकाे प्रमाण मेटाउन लाउने काे हाे ? दरबार हत्याकाण्डका सबै सबुतहरू नुसन्धान विनै किन नष्ट गरियाे ? राजा मारिंदा संसदलार्इ श्रद्धाञ्जलि दिन कसले राेक्याे ? माअाेवादी र संसदवादीहरूले एकअर्काका कार्यकर्ताहरूकाे कत्लेअाम गरिरहेकाे समयमा उनीहरूका बीचमा भारतमा बैठकहरू कसले गराउँथ्याे। १० बर्ष रगतकाे अाहालमा अट्टहास गर्ने कथित प्रतिपक्षि भरियाहरू १२ बुँदेमा कुन राजनीतिक मूल्यले जाेडिए ?
अपराधि विदेशी चाटुकारहरू हाे ! साम्राज्यवादीहरूकाे दशकाैंदेखिकाे यस्ताे षडयन्त्रलार्इ अाेझेलमा पार्न विचारकाे मुकुण्डाे लगाएर जनतालार्इ अल्मल्याउन अब तिमीहरू सफल हुँदैनाैं। तराइमा अहिले जे भैरहेकाे छ, त्यसका त्यहाँकाे कुनै मधेशी वा सुरक्षाकर्मि वा एमाले कार्यकर्ताकाे हात छैन। हात छ तिमीहरूकाे अन्नदाता र तिमी जस्ता अपराधि भरियाहरूकाे। लामाे समयदेखि हुँदै अाएका जघन्य घटनाहरू र त्यसप्रति राज्यकाे उदासिनताले यहि भन्छ। अहिलेका घटनाहरूमा तिम्रै प्रभु हात छ।
राजनीतिक विश्लेषक तथा राजनीतिकर्मी भरत दाहालले फेसबुकमा लेख्नुभएका जानकारीहरु समय सान्दर्भिक र जानकारीमूलक भएकाले साभार गरिएको हो ।